Social Marketing | Reef Resilience
Siansa sy paikady
ny niatrika an'izany
Fanaraha-maso sy fanombanana
Ny drafitr'asa momba ny serasera
Tanjona sy tanjona
Mpitondra hafatra sy tetika
Fanatanterahana fivoriana mahomby
Sarobidy ny haran-dranomasina
Inona no atao hoe ara-tsosialy?
Ny marketing ara-tsosialy dia ny fampiharana ara-barotra, miaraka amin'ireo hevitra sy teknika hafa, mba hahatratrarana tanjona voafaritra tsara ho an'ny tombontsoa ara-tsosialy. ref Ny marketing ara-tsosialy dia nampiasaina hamahana ireo olana ara-tontolo iainana toy ny ala mikitroka maharitra, ny fampihenana ny fanjifana rano, ny fanesorana ny tsy fandriam-pahaleman'ny rano, ny fampihenana ny hazondamosin'ny gidro, ary ny fampihenana ny fiara tsy manara-penitra.
Ohatra sasantsasany amin'ireo fanentanana ara-barotra sosialy hafa ivelan'ny sehatry ny tontolo iainana dia ahitana fampielezan-kevitra izay mandrisika ny fialana amin'ny sigara sy ny fiarovana ny fiarovana. Ny fomba fitsaboana ara-tsosialy dia manondro ireo sakana izay manakana ny olona tsy handray anjara amin'ny hetsika, ary koa ny antony manosika azy hanao asa. Izany dia tsy mitovy amin'ny fitantarana nentim-paharazana amin'ny fahatsapana fa tsy ampy fotsiny ny fampahalalam-baovao mba hanombohana fiovana na fihetsika ataon'ny mpiray antoka.
Nahoana no mampiasa marketing ara-tsosialy?
Maro ny fiarovana ny haran-dranomasina sy ny sampan-draharaham-pitantanana dia matetika mampiasa fomba fitadiavana fampahafantarana amin'ny aterineto rehefa miezaka manatratra ny fiovan'ny fitondran-tena. Ity karazana fitarainana ity dia fomba fanao mahazatra ary ankasitrahan'ny fikambanana izay manome lanjany ny vokatra (isa ny bokikely nozaraina) fa tsy ny vokatra (isa ny olona manova fitondran-tena manokana). Na dia mety hahomby aza ny fanabeazana, ny fitsipika ary ny dokam-barotra amin'ny fananganana ny fanentanana ho an'ny besinimaro sy ny fihetsika manova, ny fiovan'ny fitondran-tena dia tsy voatery ho vokatry ny fombany. Ilaina ny hanaovana bebe kokoa ny fanovana fihetsika.
Ny fampiasana mahomby amin'ny marketing ara-tsosialy dia afaka manampy ny fitondran'ny mpitantana fanovana; Afaka manampy amin'ny fanatanterahana sy hanohanana ny tanjon'ny fiarovana izy ary hamoaka hetsika mba hiarovana ny haran-dranomasina. Afaka manampy amin'ny fanatontosana ihany koa izany fanavaozana tsena maharitra, izay mety hitarika amin'ny fanatsarana ny fitantanana ny loharano, ny fampitomboana ny fitantanana ny fitantanana, ary ireo mpandray anjara mahasarika kokoa. Jereo ireo ohatra etsy ambany misokatra amin'ny varavarankely vaovaoRare ny fanentanana ara-barotra ara-tsosialy mahomby momba ny olana mifandraika amin'ny mpitantana ny haran-dranomasina sy ny fiompiana miankina amin'ny haran-dranomasina.
Ny fanovana ny fomba fisamboran'ny mpanjono sy ny fatran'ny fetra, misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNosy Abaco, Bahamas
Manova ny fomba fitondran'ny olona any amin'ny iray amin'ireo rafitra lehibe indrindra amin'ny vatohara vatohara eto amin'izao tontolo izao, misokatra amin'ny varavarankely vaovaoAndavadoaka Coast, Madagasikara
Ny fampiroboroboana ny famoronana sy ny fanarahan-dàlana amin'ny faritra famerenana ny fanjonoana, misokatra amin'ny varavarankely vaovaoBahia de los Angeles, Meksika
Miaro ny tontolo iainana an-dranomasina amin'ny alàlan'ny fanentanana ny mpanjono mba hampiasa fomba fisakafoanana maharitra mba hampihenana ny fandrosoana sy ny fampiasana dynamite, cyanide ary ny fiaramanidina, misokatra amin'ny varavarankely vaovaoWakatobi Marine Park, Sulawesi
Ho fampahalalana misimisy kokoa momba ireo fanentanana ireo misokatra amin'ny varavarankely vaovao .
Rahoviana no tokony hampiasaina ara-tsosialy?
Ny marketing ara-tsosialy dia manampy hamantatra hoe iza no tokony hokarohina amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny fifandraisana, ary ny fomba hisarihana ireo olona ireo amin'ny fomba mahomby indrindra. Ny ezaka ara-tsosialy ara-tsosialy mahomby dia ezaka feno izay mitaky fotoana sy loharanom-panazavana manan-danja hanatanterahana. Torohevitra ara-tsosialy sosialy tokony hodinihina rehefa misy tetikasa manandrana:
Manova ny fitondran-tenan'ny olona marobe: Ohatra, ny marketing ara-tsosialy dia mety ho fitaovana tsara ampiasaina rehefa manandrana manova ny fihetsika ataon'ny filan-kevitra ao amin'ny faritra iray
Manova fitondrantena amin'ny maharitra ela (am-polony taona, mandrakizay)
Mpikambana ao amin'ny fanentanana ara-tsosialy sosialy
Ny fampivelarana ny hetsika ara-tsosialy ara-tsosialy dia ahitana ampahany efatra lehibe:
Famaritana sy fahatakarana ny olana, tanjona, mpihaino vitsivitsy, sakana sy tombontsoa
Fanandramana mandrisika sy mifidy paikady izay mety indrindra, anisan'izany ny famolavolana hafatra
Fametrahana fanentanana ara-tsosialy ara-tsosialy
Mamaritra ny paikady
Ny vondrona mifantoka amin'ny fifantohana, fanadihadiana sy fanadihadiana dia fitaovana lehibe ampiasaina amin'ny fanentanana ara-barotra ara-tsosialy mahomby mba ahafahana mahazo tsara kokoa ny fahalalana, ny toe-tsaina ary ny fanentanana ny mpihaino. Ireo fomba ireo ihany koa dia azo ampiasaina amin'ny alàlan'ny hafatra fohy ary mifidy paikady amin'ny fanentanana iray. Ho an'ny fitarihana amin'ny antsipiriany momba ny fampiasana sy ny fitantanana vondrona mifantoka dia jereo ny antontan-taratasy ao amin'ny Resource, etsy ambany, Mitantana ny vondrona misy anao manokana ary Fampidirana ny tarika hifantoka amin'ny fifantohana.
Ho an'ny tari-dalana fanampiny amin'ny dingana tsirairay amin'ny fampivelarana hetsika ara-tsosialy ara-tsosialy, tsipiriany momba ny fahatakarana ny mpijery sy ny fampiasana fanadihadiana, jereo misokatra amin'ny varavarankely vaovaoMitarika fanentanana ara-tsosialy.
Fantaro ny fahatakaranao
Diniho ny fahatakaranao momba ny fampahalalana ao amin'ity fizarana ity amin'ny alalan'ny fanesorana ny quiz.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoTake Quiz
Fandaharanasa ara-tsosialy sosialy avy amin'ireo tanàna mpanjono madinika
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFanaovana hetsika
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFitaovana fanovana: fomba fanao ho fampiroboroboana ny fahasalamana, fiarovana ary ny olom-pirenena
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoMitantana ny vondrona misy anao manokanamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFampidirana ny tarika Mifantoka amin'ny fifantohanamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFikambanana Toolbox Community: Mitarika fanentanana ara-tsosialy
pporno youjizz xmxx mpampianatra xxx Firaisana Ara-nofo
politika fiarovana fiainan'olonamanokatra fisie XML
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFacebook
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoamin'ny twitter
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoYouTube